आठ हजार प्रकाशवर्ष पर पनि बाह्यचन्द्र , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आठ हजार प्रकाशवर्ष पर पनि बाह्यचन्द्र
बीबीसी । खगोलशास्त्रीहरूले हाम्रो सौर्यमण्डलबाहिर पनि अर्को चन्द्रमा रहेको हुनसक्ने बताएका छन्।
त्यो बाह्यचन्द्र हाम्रो आकाशमा भएका खगोलीय पिण्डभन्दा पृथक् छ। आकारमा वरुण ग्रहजति ठूलो त्यो सम्भावित उपग्रहले बृहस्पतिजत्रो ग्रहको परिक्रमा गर्छ। तर त्यसको पिण्ड भने १० गुणा बढी छ।
बाह्यचन्द्र बारे खगोलशास्त्री डेभिड किपिङ र एलेक्स टीचीले गरेको अनुसन्धान साइअन्स् अड्भान्सेस् जर्नलमा प्रकाशित भएको छ।
न्यू योर्कस्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा कार्यरत डा किपिङले अन्तरिक्षयानमा भएको त्रुटि अथवा अन्य ग्रह वा ताराका गतिविधिका कारण अवलोकनमा अन्यथा देखिएको होइन भनेर छुट्याउन यथाशक्य प्रयास गरिएको बताएका छन्।
अनुसन्धानकर्ताहरूले हबल टेलिस्कोप गरेर अक्टोबरमा थप अवलोकन गर्नेछन्। तर हामीसँग भएका सबै डेटालाई वर्णन गर्न सक्ने अर्को कुनै सिद्धान्त हामीले फेला पार्न सकेनौँ, उनले भने।
अहिलेसम्म खगोलशास्त्रीहरूले सूर्यबाहेकका अन्य तारावरिपरि घुम्ने ३५ सयवटाभन्दा बढी बाह्यग्रह पत्ता लगाएका छन्।
सँगसँगै ती सौरमण्डलका सदस्य ग्रहका उपग्रह अर्थात् बाह्यचन्द्रको पनि खोजी भएको छ। तर ती उपग्रहहरू हाल उपलब्ध प्रविधिले पत्ता लगाउन सक्ने क्षमताको सीमाभन्दा अलि पर छन्। केप्लर सिक्स्टीनट्वेन्टीफाइभ बी नाम दिइएको ग्रह उसको माउ तारा अगाडिबाट हिँडेको अनुसन्धानकर्ताहरूले अवलोकन गरेका थिए।
त्यो १९ घण्टा लामो पारगमनको अवधिमा ताराबाट प्रकाश छेकिएको थियो। त्यो तारा पृथ्वीबाट आठ हजार प्रकाशवर्ष टाढा रहेको छ। किपिङ र टीचीले विभिन्न पारगमनबाट सङ्कलित डेटामा बाह्यचन्द्रको अस्तित्व देखाउने दुईवटा सङ्केत खोजेका थिए।